FSX 747 2 afọ 3 ọnwa gara aga #1033
Tupu m amalite, kudos na Air Force One 747-8I add-on, ọ kachasị mma add-on ụgbọ elu m na-agba n'ime ajụjụ abụọ maka otu a:
1) Echere m otu esi ekenye bọtịnụ ọṅụ (trigger) iji nweta engine engine AF1 ka ọ gbanwee ma enweghi m ike ịnweta ihe niile 4 na-atụkọta ọnụ n'otu ugboro na azụ? Enweghị nke ahụ, m ga-enweta 10% kachasị aka, ọ bụghị enyemaka dị ukwuu na ọsọ ọsọ 6'000ft grrrrr
2) Enwere m usoro nyocha abụọ, nyochaa ihuenyo nwere ihuenyo VC ọ bụla, nke abụọ m na-eji maka echiche dị iche iche Instrument, ọ na-ewe oge iji setịpụ oge ọ bụla m na-egwu egwu, agbalịrị m ịchekwa ụgbọ elu otu oge ma ọ ghara ịchekwa ntọala ihuenyo abụọ. A ga-atụle aro ọ bụla.
Daalụ maka saịtị a, ana m amasị ya!
FSX 747 2 afọ 3 ọnwa gara aga #1034
N'ụzọ dị nwute, enweghị m ike inye aka na nke ahụ n'agbanyeghị na nke ahụ ga-adọrọ mmasị. Checked enyochala ohere ọ bụla FSX Otu dị iche iche na FB? Amaara m na m dị ọtụtụ ma ha dị ka hà nwere ihe ọmụma (na ọtụtụ ihe ...... na ndị ọzọ ha bara uru dịka nnụnnụ ehi na ....).
FSX 747 2 afọ 3 ọnwa gara aga #1035
Hey, na FSX ekenye matriks dị ala karịa maka osisi ọ joyụ na ụfọdụ ụgbọ elu ụgbọ elu. Mana inwere ike nwalee ihe ndị a ... Pinye n'ime bọtịnụ na igodo ebe ma pịdaa na ngalaba ebe ị hụrụ F2 (Igodo akpọgodi) Mee ka akụkụ ahụ pụta ìhè, ma pịa igodo mkpali na ọ joụ gị. Ọ bụrụ na ọ na-emeghachi ma ị na-ahụ ka ọ na-agbanwe, bọtịnụ trigger ahụ ga-aghọ igodo azụ. Jisie ike
FSX 747 2 afọ 3 ọnwa gara aga #1036
Ọ bụ otú ahụ ka m kenyere bọtịnụ ọṅụ iji weghachite ọbụlagodi ma ọ bụrụ na m na-emegharị ugboro ugboro ka ọ bụrụ na ọ bụghị karịa 10%, nkeji m na-eme ka mbido na-ejikwa njikwa ọṅụ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ ghara ịghaghachi ma na-emegharị ya, ọ bụghị kpọmkwem ihe ị na-achọ maka ọsọ ọsọ. Daalụ maka ntinye gị, m ekele ya !!!!
FSX 747 2 afọ 3 ọnwa gara aga #1037
Ee, ị nwaaala ọtụtụ nkuzi nke bọtịnụ ahụ? O meela ihe dịịrị m, mana ọ bụ bọtịnụ dị iche na ọystụ m. Naanị echiche, mana FSX bụ usoro amachibeghi oke na mpaghara a ..
Oge ike page: 0.202 sekọnd